Isticmaalayaasha IPhone 13 waxay soo sheegaan khaladaadka marka ay furayaan Apple Watch | Wararka IPhone
Imaatinka ee Covid-19 waxay la timid isbeddello badan oo nolosheenna maalinlaha ah. Mid iyaga ka mid ah waa maaskaro inala jirtay tan iyo bilowgii masiibada. Si kastaba ha ahaatee, qalabkan ayaa xaddiday falalka qaarkood oo aan samayn jirnay maalin kasta, sida ku furaya iPhone -kaaga Face ID. Bishii Abriil, Apple waxay soo saartay nidaam furitaan iyada oo loo marayo Apple Watch iyada oo la dhaafiyey Aqoonsiga Wajiga iyadoo la adeegsanayo nidaam xaqiijin labaad. Isticmaalayaasha cusub ee iPhone 13 ayaa ka warbixinaya dhibaatooyinka marka ay adeegsanayaan iyo Apple waxay u badan tahay inay si dhakhso leh u sii daayaan casriyeyn si ay u hagaajiyaan.
Khaladaadka in lagu furo iPhone 13 Apple Watch
Ku fur iPhone -kaaga Apple Watch marka aad maqaarka xiran tahay. Markaad xiran tahay maaskaro iyo Apple Watch, waad kor u qaadi kartaa oo fiirin kartaa iPhone -ka si aad u furto. Baro sida loo sameeyo oo loo isticmaalo astaantan.
Ujeeddada tan nidaamka furayay way caddahay: iska ilaali adeegsiga Face ID si aad u furto terminal. Tani, Apple waxay ahayd inay lahaato nidaam amni oo dibadeed si loo xaqiijiyo inaan nahay kuwa furaya iPhone. Oo kanu waa meeshii Apple Watch soo galay oo helaya ogeysiis marka la isku dayayo in la furo aaladda. Ka dib markaan xaqiijinno, waxaan geli karnaa dariiqa dhibka iyada oo aan laga qaadin maaskaro.
Saacadihii ugu dambeeyay adeegsadayaasha cusub ee iPhone 13 dhib ayay ku qabaan isticmaalka astaantan. Markay isku dayaan inay ku furaan Apple Watch waxay helaan fariin qalad ah:
Aan la xiriiri karin Apple Watch. Hubi in Apple Watch la furay iyo gacantaada, iyo iPhone oo la furay.
Sida loogu furo iphone-kaaga maaskaro iyo Apple Watch
Iyada oo loo marayo Reddit adeegsadayaasha qaarkood waxay ku guuleysteen inay fahmaan sababta qaladkan. Waxaa loo malaynayaa in iPhone 13 uu soo saaro furaha furaha marka howshu bilaabato oo loo diro Apple Watch si loo furo furaha iyadoo la adeegsanayo furahaas. Si kastaba ha ahaatee, qaladkan waa la tuuray sababtoo ah iPhone 13 ma awoodo inuu soo saaro furaha furaha shaqaduna waa curyaan oo xiriirka labada qalab ma dhaco.
Apple waxaa laga yaabaa inay u baahato inay sii deyso nooc ka mid ah macruufka 15 si loo xaliyo dhibaatadan. Waxay u badan tahay in haddii Apple ay u tixgeliyaan inay tahay in la xaliyo sida ugu dhakhsaha badan ay ka fiirsan doonaan bilaabista macruufka 15.0.1. Haddii kale, waxay sugi doonaan nooca macruufka 15.1 ee dib u soo celin doona shaqooyinka qaarkood sida SharePlay oo laga saaray wejiyada ugu dambeeya ee betas soosaaraha.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » Isticmaalayaasha IPhone 13 waxay soo sheegaan khaladaadka furitaanka Apple Watch
Aniga dhibaato isku mid ah ayaan qabaa. Waxaan hore u sugayay cusboonaysiin.
Ka jawaab Darth Koul
Waxay igu dhacdaa 13 pro max
Runtii, waxaan ka mid ahay dadka dhibaatadani saamaysay. Waxaan rajaynayaa inay si dhakhso ah u xalliyaan, ma aha wax la aqbali karo in dhibta noocan ahi ay ka dhacdo aalad qiimahan leh.
Jawaab Esteban González
Ciise R. dijo
Way na waalayaan. Xawilaadda oo dhan ayaa dhammaystiran, marka laga reebo Movistar eSIM taas
Waxay ku sii wadaan inay kaa dhex maraan sanduuqa, iyo furitaanka maaskaro inaga waalan.
Ka jawaab jesus R.
Waxaan ku xalliyay dib u soo celinta iPhone -ka iyo ka dib markii aan u soo celiyay sidii iPhone cusub oo aan raray gurmadkii, intaas oo dhan waxaa caawiyay Apple waxayna ii shaqeysaa si caadi ah waxaan haystaa iPhone 13pro
Sidoo kale iima ogola inaan u habeeyo si aan u furo Mac.
Anigana igama tagin IPhone 13 sidoo kale !!!! Waxaan isku dayay wax walba, dib u soo celin, masixi, dib u dejin labada aaladood iyo waxba
Tijaabooyinka batteriga ee IPhone 13 Pro waxay muujinayaan runtime weyn